China 45 HRC Square End mill-4 Flute mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Famolavolana vokatra: ny fitsangatsanganana an-tsokosoko dia afaka manao centering sy chamfering. Toerana marim-pototra ny lavaka sy ny chamfer dia tanterahina amin'ny fotoana iray hanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana.
Etsy ambany no hahitanao ireo haingam-pandeha azo sintomina sy mahasoa amin'ny mpanonta ho an'ity tsipika vokatra ity. Ny masontsivana haingam-pandeha sy ny haingam-pandeha rehetra dia soso-kevitra hanombohana soatoavina izay azo ampitomboina raha toa ka misy ny fepetra fananganana tsara indrindra. Raha tsy hitanao ny vaovao tadiavinao dia manana ekipa manam-pahaizana manokana hanampy anao i Weix Tool.
* Ahafahanao ho an'ny rindranasa sy ny famaranana
* Fandeferana H6shank ho an'ireo manana fitaovana avo lenta
* Fametahana ALTiN ho an'ny fanosorana fanampiny, hafainganam-pandeha avo kokoa ary famahanana ary hampitombo ny fanoherana ny fitafy
* Drafitra famolavolana lamina manokana, fomba fiasa tsara kokoa amin'ny fiainana miasa lava
Manantena izahay fa afaka manangana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa rehetra, ary manantena fa afaka manatsara ny fifaninanana ary manatratra ny toe-javatra mandresy miaraka amin'ireo mpanjifa. Raisinay an-tanan-droa ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hifandray aminay amin'izay ilainareo! Tongasoa ny mpanjifa rehetra na an-trano na any ivelany hitsidika ny orinasanay. Manantena izahay fa hanana fifandraisana mandresy fandresena miaraka aminareo, ary hamorona rahampitso tsaratsara kokoa.
Manaraka ny lalàna sy ny fampiharana iraisam-pirenena ny orinasanay. Mampanantena izahay fa tompon'andraikitra amin'ny namana, mpanjifa ary mpiara-miasa rehetra. Tianay ny mametraka fifandraisana maharitra sy fisakaizana amin'ireo mpanjifa rehetra eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny tombotsoan'ny tsirairay. Miarahaba antsika mpanjifa taloha sy vaovao vaovao rehetra hitsidika ny orinasanay hifampiraharaha amin'ny orinasa.
Teo aloha: 45 HRC NC Spotting Drills ho an'ny alimo
Manaraka: 45 HRC Square End mill-4 Flute D4mm
Mills farany lava halava
Faran'ny famaranana ny lavan'ny sodina